चर्चित नायिका प्रियंका चोपडा आमा बनिन्, प्रियंका र निक छन् खुशीले फुरुगं – Sandesh Press
January 22, 2022 124
काठमाडौं, ८ माघ । बलिउड-हलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडा सरोगेसीका माध्यमबाट आमा बनेकी छन् । उनले शुक्रबार राति १२ बजे इन्स्टाग्राममा एक पोस्टमार्फत यो जानकारी दिएकी हुन् ।
‘यो कुरा बताउँदा हामी खुसी छौं कि हामी सरोगेसीका माध्यमबाट आफ्नो जीवनमा एक बच्चालाई स्वागत गरिरहेका छौं । हामी आफ्नो परिवारका लागि तपाईंसँग सम्मानपूर्वक आग्रह गर्छौ कि यो विशेष समयमा हाम्रो गोपनियतालाई ध्यान दिनुहोला,’ उनले लेखेकी छन् ।
प्रियंका र निक जोनासको जोडी बलिउडमा लोकप्रिय जोडीका रुपमा चिनिन्छन् । दुवैले सन् २०१८ डिसेम्बर २ मा उदयपुरको उम्मेद भवनमा हिन्दु र क्रिश्चियन रीतिरिवाज अनुसार विवाह गरेका थिए ।जाजरकोटका एक युवा १८ महिनादेखि स्वास्थ्य समस्याका कारण छटपटाइ रहेका छन् । उनको अवस्था देख्दा एक मनले कठै भन्न मन लाग्छ । अर्को मनले यी सोझा सीधा नेपाली युवालाई यस्तो अवस्थामा पु-याउनेहरुमाथि मध्ययुगीन सजाय होस् भन्ने पनि लाग्छ ।
Prevवीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा एकैदिन ९ जना संक्रमितको मृत्यु !
Nextसाउदीमा १८ महिनादेखि व्यथाले भूइँमै छटपटाइरहेका यी नेपाली युवककको दर्दनाक दृश्य (भिडियो सहित)
हल्का खोकी लाग्ने बितिकै नगर्नुहोस बेवास्ता, लाग्नसक्छ यो खतरनाक बिमारी !
गुडिरहेको बसमा २ बच्चा जन्मिएपछी जीवनभर बसको भाडा तिर्नु नपर्ने सरकारको घोषणा